लक्ष्मी इक्विटी फन्डको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य ८ रुपैयाँ ८२ पैसा, प्रभुको धेरै सेयर
काठमाडौं : लक्ष्मी इक्विटी फन्डको चैत महिनामा प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य १ पैसाले बढेर ८ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको छ । फागुनमा यो फन्डको प्रतिइकाई खुद सम्पति मूल्य ८ रुपैयाँ ८१ पैसा थियो । फन्डको खुद सम्पति पनि ८ लाख ५१ हजार ८६८ रुपैयाँले बढेर १ अर्ब १० करोड १८ लाख ७६ हजार ९१२ रुपैयाँ कायम भएको छ । फागुन सम्ममा यस फन्डको खुद सम्पत्ति १ अर्ब १० करोड १० लाख २५ हजार ४४ रुपैयाँ थियो ।
चैतमा बैंक मौज्दातमा २३ करोड २१ लाख ६५ हजार ५५३ रुपैयाँ र मुद्दति निक्षेपमा २५ करोड रुपैयाँ रहेको देखाइएको छ । यस फन्डको जम्मा जारी इकाई १२ करोड ५० लाख हो । लक्ष्मी इक्विटीले ५५ वटा सूचीकृत कम्पनीको ११ लाख ४५ हजार ३३७ कित्ता सेयर होल्ड गरेको छ । यस फन्डले कुल ६२ करोड ५४ लाख ८१ हजार १६० रुपैयाँ सेयरमा लगानी गरेको हो ।
लक्ष्मी इक्विटी फन्डले सबैभन्दा धेरै प्रभु बैंकको ६१ हजार ५७४ कित्ता सेयर होल्ड गरेको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको ३१ हजार ८९६ कित्ता सेयरमा ३ करोड ६८ लाख ३९ हजार ८८० रुपैयाँ लगानी छ । यस फन्डको योजना व्यवस्थापक लक्ष्मी क्यापिटल हो भने कोष प्रवद्र्धक लक्ष्मी बैंक रहेको छ ।
लक्ष्मी इक्विटी फन्डको चैत महिनाको सम्पूर्ण विवरण यसरी पढौं
सामुदायिक लघुवित्तले कहिले बोलायो साधारण सभा ? यस्ता छन प्रस्तावहरु
लगानीयोग्य नगद अभाव हुन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले आइतबार ५ अर्ब बजारमा पठाउँदै
चालीस मेगावाटको अपि चमेलिया निर्माण सुरु हुने, प्राधिकरणसँग पीपीए सम्झौता सम्पन्न
नेप्सेमा १ करोड ३८ लाख कित्ता सेयर थपियो, ३ कम्पनीको बोनस सूचीकृत
त्रिशुली जलविद्युतको आइपीओमा पहिलो दिनमै ३.६४ गुणा बढी आवेदन, कतिले भरे ?
गणपति माइक्रोफाइनान्सलाई ३ लाख ३५ हजार कित्ता आइपीओ अनुमति, रेटिङ कति ?